गुम्दाका धनसिंह ः जस्लाई भूकम्पले १५ ठाउँमा भाँच्यो - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गुम्दाका धनसिंह ः जस्लाई भूकम्पले १५ ठाउँमा भाँच्यो
Published On : २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:१७
यदु अधिकारी ः प्राकृतिक प्रकोपअन्तर्गत भूकम्प भयावह मध्ये अग्रपंक्तिमा पर्दछ ।
नेपालमा १२ सय ७८ देखि भूकम्प गएको कुरो भूकम्पविद्हरु उल्लेख गरेका छन् । १८३३ तिर गोरखा उत्तरी क्षेत्रलाई केन्द्र विन्दु वनाएर गएको थियो भनी वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेको छन् । २०७२ साल बैशाख १२को भूकम्पले धेरै जन धनको क्षति गरायो । कयौं परिवारको घरमा सिस्नु उम्रियो । धार्चे मनास्लु पर्यटन विकास समितिले पदयात्रा गरी ३२ सय २० उच्चाइमा रहेको धार्चेमा भूकम्प स्मृति दिवस मनाई पदयात्रालाई अगाडि वढाउने निर्णय अनुसार २०७५÷०१÷१२ गते विहान भूकम्पमा परी दिवंगत भएका व्यक्तिहरुको आत्माको चीर शान्तिको लागि मौन धारण गरी धुपबत्ती वाल्ने काम गरियो । डाँडा डाडै रमणीय दृश्यावलोकन गर्दै लाप्रकको नमुना बस्ती पुगियो । २० किलोमिटर टाढावाट पानीको खर्च करिव ५ करोड रहेको पनि थाहा पाइयो । धार्चे गाउपालिकाले आयोजन गरेको आरोही स्मृति पार्कको शिलान्यास कार्याक्रममा प्रदेश मन्त्री लगायत धार्चे पर्यटन विकास समितिका पदयात्रीहरुलाई स्वागत एवं माया चिनो उपहार दिएर प्रोत्साहन वढाउने काम गरियो । उत्तरी क्षेत्रको गुम्दा वसोवास र आलु खेतीको लागि पहिले देखिनै चचित थियो । त्यहाँका रमणीय घरहरु र भल निकासा गर्ने तरिका अनुपम नै देखियो ।
एैतिहासिक चुङ्काङकोट अवलोकन गर्ने सल्लाह वमोजिम पूर्ब राज्यमन्त्री वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र गाउँलेहरु पनि हाम्रो टिममा सहभागी भए चौंवीस सय वयासी मिटर उच्चाईमा रहेको चुङकाङकोटको चौंर भासिएर तल पुगेको रहेछ । त्यहाँ पुग्नको लागि प्राण हात्केलामा लिएर जानु पर्दो रहेछ । विशाल पहिरो देखियो त्यहाँवाट माछीखोला बूढीगण्डकी पारि केरौजा र काशीगाउँमा समेत डरलाग्दो पहिरो देखियो ।
भूकम्पमा दिवंगत भएका त्यस क्षेत्रका महानुभावहरुको नाममा मौनधारणा गरी धुप बत्ती वाल्ने काम चुङकाङकोटमा गरियो । ओरालो लाग्ने क्रममा फलफूलको दृश्यावलोक गर्दै १२ गोठ मध्ये ९ गोठका गोठालाहरुको भूकम्पमा परी देवासन भएको यार्साकङ आइपुगियो । त्यस खर्कमा सिस्नुको झ्याङ मात्र देखियो । त्यस खर्कालाई लामाले वुद्ध धर्म अनुसार शान्ति गरेर छोडेको भन्ने सुनियो । यात्रा अघि बढ्ने क्रममा अकस्मात् धनसिंह गुरुङ भेट भए । उनले पूर्व राज्य मन्त्री छमबहादुरलाई अंगालो हाले । उनले आफू २०७२ सालको भूकम्पकको परी १५ ठाउँमा शरीर भाँचिएको बताए । उनको शरीर भरी खतको डोब मात्र देखियो । भाँचिएको हात खुट्टाका भागहरुमा डोबमात्र देख्दा साह्रै चिन्त दुःख्यो । आफू पिनसेन वाला भएको उनले वताए । छ महिना गोरखा अस्पताल उपचार गरी पुनः गोठालो वन्न सकेकोमा उनले गर्व गरे । गुम्दामा चौंध जना भूकम्पमा परि देहावसन भएका रहेछन् । घाइते र मृतकलाई खोज्ने क्रममा गाँउलेहरु लागेछन् । उनी ३ दिन पछि मात्र भेटिएका रहेछन् ।उनलाई यार्साकङको भिरमा खोज्ने क्रममा खच्चड गोठालो सुकबहादु गुरुङले पत्ता लगाएका रहेछन् । उनी घाइते भएको भिरमा उनी भन्दा माथि बोका बाख्रा मरेको देखेछन् । आफू एक्लैले उद्धार गर्न नसके पछि गाँउमा गई । सातु र पानी ल्याएछन् । नाम्लोले वोकी समथर ठाउँमा ल्याउँदा उनको भाँचिएको शरीरको भाग सुकुटी जस्तो भएको थियो रे । उनले हरियो मथिनोको पात खाँएर बाँचेका रहेछन् । उनको शरीर हरियो नै हरियो भएको थियो रे । चौंथो दिनको दिनमा उनलाई हेलिकप्टरले उद्धार गरेको रहेछ ।
संसारमा मावनले माया गरे पनि दैवले माया गरेनन् भने कोही पनि जीवत रहदैन । मानवले हेला गरे पनि दैवले माया ग¥यो भने कोही पनि मर्दैन भन्ने लोकोक्ति प्रचलित छ । भूकम्पमा परी धेरैको इहलीला समाप्त भयो दैवले वचाएका १५ ठाउँमा शरीर भाँच्चिएका धनसिंह गुरुङ पुनर्जीवन पाई पुर्खाको पेशा गोठालो वन्न पाएकोमा गौरब गरेका छन् ।